Tünektepe Teleferik 790 Bin Kişiyi Zirveye Taşıdı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaTünektepe Teleferik 790 ayaa Kumanaan Caruur ah Ku Dhaqaaqaya
09 / 01 / 2019 07 Antalya, Coast Mediterranean, GUUD, Gondola, Headline, TURKEY, TELPHER
xawaaraha tunectepe 790 ayaa kumanaan qof ku kiciyay dhinaca sare
Mashruuca Tünektepe Telefererka ah ee magaalada Antalya, tan iyo maalintii 90 kun kun oo dalxiisayaal ah, oo ay ka mid yihiin 790 kun qof ayaa qaadey shirkii. Tünektepe wuxuu noqday mid ka mid ah jiidashada cusub ee Antalya.
Mashruuca Tünektepe Teleferik, oo ay furtay Dawladda Hoose ee Antalya bishii Febraayo 2017 '' Cagahaaga waa laga gooyn doonaa dhulka ', ayaa kun qof oo 790 ah u qaaday kore. Qiyaas ahaan kunka 90 ee dalxiisayaasha ajanabiga ah ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya mashruuca Tünektepe Cable Carbeed ayaa noqotay xarunta cusub ee jimicsiga ee Antalya. Tünektepe, oo ay soo xaadireen booqdayaasha xagaaga iyo jiilaalka, ayaa noqotey meel ay u socdaan in dadka martida ah ee magaalada laga arki karo magaalada iyo sidoo kale dadka reer Antalya. Laga soo bilaabo baabuurta fiilada ah ee shirarka 605 ee Sarısu, 9 wuxuu bixiyaa gaadiidka daqiiqadaha. Makhaayadda Teleferik iyo teendhada Yoruk ee shirku waxay bixisaa daqiiqado aan la iloobi karin oo leh munaasado qurux badan oo qurxoon iyo aragtiyo gaar ah.
Cinwaanka taataabooyinka aan la ilaawi karin
Tünektepe, oo noqday xarun nololeed oo dadka martida ah ay waqti ku raaxaystaan, sidoo kale waxay u adeegaan quraacda. Martidu waxay ku raaxeysan karaan quraacda oo ay ku faafaan quruxda indhaha ah ee madow ugu quruxda badan ee buluug ah marka qiimaha TL 20 qofkiiba. Isla mar ahaantaana, Yörük dhaqameedku wuxuu ku noolyahay aagga halkaa oo teendhooyinka muuqaalka quruxda badan ee buuraha Taurus ay marti ku yihiin safar taariikheed. Kalluunka, lakabka saliida iyo lakabyada ee lagu kariyey timaha ayaa ka tagaya dhadhan aan la ilaawi karin oo ku yaal dharka dushooda. Booqashadu waxay sidoo kale amar ku bixin kartaa taarikada quraacda leh.
Degmada magaalomadaxda ee ANET ANET AŞ. Xarumaha Bulshada ee Tünektepe, oo ay maamusho, waxay noqotay mid ka mid ah meelaha caanka ah ee Antalya. Xiddiga 1706 ee xariiqa gaaban ee xawaaraha, qofka 36 waxaa loo qabtaa shirarka oo leh 1200 cabin. Tünektepe'den muwaadiniinta doonaya inay daawadaan aragtida quruxda badan ee Antalya waxay ka faa'iideysan kartaa baabuurta fiilada. Martidu waxay ka faa'iideysan kartaa pizza, baastada, saladhka, saqafka hilibka iyo hamburgerka qiimaha ugu macquulsan ee makhaayadda ugu weyn ee ku yaalla Xarunta Bulshada. Qeybta cabitaanka ee ku yaal koofurta barafka waxay bixisaa cuntooyin hodan ah oo jilicsan, baradhada caanaha, barafka iyo kafeega adduunka oo idil.